Natiora, Maha Olona, Ary Zavatra Hafa ianaranao Amin’ny Fanaovana Horonantsary Famakafakàna Any Meksika, Eo Imoron’ny Reniranon’i Usumacinta · Global Voices teny Malagasy
Natiora, Maha Olona, Ary Zavatra Hafa ianaranao Amin'ny Fanaovana Horonantsary Famakafakàna Any Meksika, Eo Imoron'ny Reniranon'i Usumacinta
Nandika (en) i Laura Macfarlane
Voadika ny 01 Jolay 2016 2:56 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, English, Français, Español
Ampahany amin'ilay horonantsary fanadihadiana “El Remolino” (Mafy Ireo Andro Tsy Misy N'inon'inona) Lahatsary fanadihadiana ahitana fanagonana ny tantaran'ny tsirairay sy izay iraisan'ny rehetra. Hita eto amin'ny sary i Dana, zanak'i Esther, mponina ao an-tanàna, mijery ny sariny ao anaty rano. Sary: Facebook. (Nahazoana fahazoan-dàlana.)
Nandeha tany El Remolino, Meksika, ilay vehivavy Espaniola mpanao horonantsary famakafakàna, Laura Herrero, mba hanao horonantsary famakafakàna mikasika ny fomba fiainan'ny tovovavy telo avy any atsimon'ny firenena izay miady amin'ny fanilikilihana, fa tsy nijanona teo amin'io tetikasa io ny fifandraisany tamin'ilay tanàna. Rehefa tao El Remolino, nijanona tao i Herrero mba hanaraka ny fiainan'ireo olona tao an-tanàna, indrindra ny tantaran'i Esther sy Pedro, mpikambana roa ao amin'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana, izay ahitàna làlana manokana, ady amin'ny natiora, ary ny fifikirana amin'ny maha izy azy ara-pananahana.
Miseho ao amin'ilay horonantsary famakafakàna “Son Duros Los Días Sin Nada” (Mafy ireo Andro Tsy misy N'inon'inona), ny ampahany voalohany amin'ilay tantara, ary misy horonantsary hafa, “El Remolino” (ny anaran'ilay vondrom-piarahamonina), maneho ny ampahany faharoa.
Mampiseho ny fanilikilihana sy ireo fanadihadiana ara-tsosialy ny “Son Duros Los Días Sin Nada” navoaka ny taona 2012 . Taorian'ny asa nandritra ny roa taona sy tapany, ary fitsidihana vondrom-piarahamonina miisa 11, nivoaka tamin'ny fetiben'ny horonantsary famakafakàna tao Meksika ny horonantsary faharoa, Ambulante 2016. Mitoetra ao amin'ny moron'ny Renirano Usumacinta, ao amin'ny fanjakàna Meksikanan'i Chiapas, ilay vondrom-piarahamonina. Araka an'i Herrero, miaina “voahodidina natiora betsaka saingy malemy, [izay] hiadiany amin'ilay renirano mitondra zavatra betsaka ho azy ireo toy ny ataony rehefa tondraka ihany koa” ireo mponiny.
Ho an'i Herrero, nihoatra lavitra noho ny fanodinana horonantsary tsotra fotsiny ny zavatra niainana tamin'ilay horonantsary famakafakàna, nilaza izy fa nahalala zavatra betsaka tokoa izy tany El Remolino, avy amin'ilay vondrom-piarahamonina sy tamin'ny fiarahana taminy. Taminà tafatafa niaraka tamin'ny vohikala Crash, nitantara ny fomba niainany io i Herrero, nilaza fa indraindray nisy zavatra hitany ho tsy nitovy tamin'ny eritreriny fotsiny, ary iny no nampiova ny fomba fisainany mivelatra kokoa. Ohatra, amin'ny zavatra miseho sasany, ireo vahiny mety mahita fahapotehana natoraly fotsiny, raha toa ireo mpikambana ao amin'ilay vondrom-piarahamonina kosa mahita ny fotoanan'ny tondradrano ho fotoanan'ny fieritreretana sy fandinihan-tena.
Sarinà Fiainana An-davan'andro: An'ny Olona Iray Manokana Mankany Amin'ny an'ny Rehetra
Manaraka ireo tantaran'i Esther sy Pedro ilay horonantsary, mpikambana roa avy amin'ilay vondrom-piarahamonina ary mpilalao fototra ao amin'ilay horonantsary famakafakàna, izay nananan'i Herrero fifandraisana mafy tokoa. Tamin'ny firesahany tamin'i Crash, nilaza i Herrero fa tena andrin'ny fahalalàny ireo olona ireo:
Esther [dia] vehivavy feno hery, izay mamelona ny fianakaviany sy mizara amintsika ny tontolony amin'ny alalan'ny fakàna lahatsary kely […]. Ny anadahiny Pedro [dia] mpamboly, nivadika taranja (lasa pelaka), izay miaro ny maha-izy azy sy ireo nofinofiny.
Taminà tafatafa niaraka tamin'ny Ambulante, nilaza ny fifanakalozam-pahalalana hitany tao amin'i Esther ihany koa i Herrero, Esther izay nahita ny fahafinaretana tamin'ny fanaovana sary mikasika ny fiainany andavanandro, tamin'ny fihaonany tamin'ny ekipan'ny horonantsary:
Nahita anay tonga sy nandrakitra niaraka tamin'ny fakàna horonantsary izy. Nieritreritra mafy momba ny firaiketana zavatra amin'ny alàlan'ny fanaovana horonantsary izy. Naka ny fitaovany fakàna horonantsary izy ary nanomboka naka ihany koa. Nandritra ilay fakàna sary, nanangana fivarotana izy, nanomboka nikaroka, ary nividy ny fitaovana fakàna sary…nisy hery lehibe tao aminy. Nanomboka naka an-tsary ny tondradrano izy, ary i Dana [zanany vavy]. Nalainy horonantsary ny rainy, ireo fivoriam-pianakaviana, ary tsikelikely, nanomboka nanao horonantsary mikasika ny olona izy.
47 taona i Pedro, anadahin'i Esther ara-boajanahary, mpiompy, izay mandalo dingana famantarana ny maha-izy azy mba ho ekena ho vehivavy. Hatramin'ny fahakeliny, hitan'i Pedro ho toy ny vehivavy ny tenany, na teo aza ny tsy fahampian'ny fahatakàrana azy, ny fanilikilihana, ary ny fanaovana an-kilabao izay hiaretany. Miankina amin'ny fanohanan'ny fianakaviany izy izao. Niompana tamin'ny ezak'i Pedro hizara torohay sy fifanakalozana torohay mikasika ny fiovàny i Herrero.
Nanontaniana mikasika ny fahantrana sy ny fanarian'ireo manampahefana ireo tanàna toa an'i El Remolino, niverina tamin'ny resaka maha-izy ny olona ara-pananahana i Herrero :
Mahagaga hoe ahoana àry any amin'ireo tanàna izay mitokamonina sy mahantra ireo […], misy olona sahala amin'i Esther sy Pedro, izay manana ady politika sy ady amin'ny maha-izy ara-pananahana. Miasa eny an-tsaha ary mahazo vola betsaka noho ny vadiny i Esther. Pedro, etsy ankilany, te-hanova fananahana ary miezaka ny hitrangan'izany. Tsy miasa saina [ny hiady amin'izany] izy satria fantany fa tsy afaka manitrika ny lohany ao anaty fasika izy [manoloana ny maha-izy azy ara-pananahana] .
Nilaza ny maha zava-dehibe ny filazàna ireo tantara sy ny fandraketana azy ireo miaraka amin'ny feo sy sary ihany koa i Herrero:
Mino aho fa ny fandraketana fotoana iray ao anatin'ny tantara no zavatra voalohany ataon'ny horonantsary, ary tehiriziny mandrakizay iny, amin'ny lafiny iray. Zava-dehibe ny manao ny horonantsray famakafakàna ho fomba fitahirizana ny tantara ho velona, amin'izay io ho tsaroina foana.